SARCOIDOSISUK သုတေသနစီမံကိန်းများ 2017
2017 ခုနှစ်တွင်ကျွန်တော်တစ်ဦးအကြောင်းမရှိခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစား sarcoidosis လူနာထံမှအသက်ရှုနမူနာခွဲခြားစိတ်ဖြာနေတဲ့စီမံကိန်း£ 120,000 ကျူးလွန်ခဲ့သော။
Sarcoidosis အတွက်အသက်ရှူသောလေထုထဲတွင်အမည်မသိပစ္စည်းဥစ္စာမှ overreacting လူနာရဲ့ရောဂါပြီးစနစ်ကိုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ခံရဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းကို sarcoidosis လူနာထံမှအသက်ရှုနမူနာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဒေတာများကိုကျွန်တော်တို့ကိုထိုကဲ့သို့သောယင်း၏အကြောင်းမရှိအဖြစ် sarcoidosis သက်ဆိုင်သောအရေးကြီးသောကိစ္စများ, တစ်အရေအတွက်, အဆုတ်ရောဂါကူးစက်မှုများနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်း၏အရေးပါမှုနှင့်ကကုသမှုကိုတုံ့ပြန်ရန်ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုပြောပြပါလိမ့်မယ်။
ဒေါက်တာစတီဗင်မုဆိုး, မန်ချက်စတာတက္ကသိုလ်သည် 2017 SarcoidosisUK-BLF Sarcoidosis သုတေသန Grant ကချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
SarcoidosisUK သုတေသန Grant က 2017 သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
"ကျနော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဤသိက္ခာရှိသောထောက်ပံ့ငွေချီးမြှများအတွက် Sarcoidosis UK နှင့်ဗြိတိသျှအဆုတ်ဖောင်ဒေးရှင်းကယ့်ကိုကျေးဇူးတင်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကိုပြင်းထန်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတင်းအချက်အလက်, ရောဂါကူးစက်မှုများနှင့် / သို့မဟုတ်ရောင်ရမ်းခြင်း၏ရှေ့မှောက်တွင်နှင့်မဆိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက် sarcoidosis ၏ဖြစ်ကောင်းအကြောင်းရင်းပေးနိုငျသောထွက်သက်အတွက်ဓါတုအချက်ပြမှုများ detect နိုင်ပါတယ်အဲဒီမှာရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အသုံးပြုရန်သွားနေကြသည်။ ဤအသက်တော်နမူနာများ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ်နေတုန်း, စုဆောင်းခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုယ်တိုင်ကအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပြီး, အဆုတ်နမူနာကောကျ၏လက်ရှိနည်းလမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသာအားသာချက်များကိုပူဇော်လိမ့်မယ်။ "
"ကျနော်တို့ကဒေါက်တာမုဆိုးရဲ့သုတေသနရန်ပုံငွေတစ်ဦးအနေအထားအတွက်ဖြစ်ဝမ်းသာပီတိနေကြသည်။ ရိုးရှင်းတဲ့နှင့် Non-ထိုးဖောက်အသက်ရှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထံမှ sarcoidosis ၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားများဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာတွေ့နိုင်ဖြစ်ခြင်း၏အလားအလာကိုကျွန်တော်တို့ကိုကျနော်တို့ကူညီပံ့ပိုးလူနာများအတွက်အလွန်အမင်းစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အလွန်ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကနေလာလတံ့သောရလာဒ်များကိုမြင်လျှင်မျှော်လင့်နေကြတယ်။ "
သငျသညျပင်ပန်းနွမ်းနယ်တွေ့ကြုံခံစားပါသလော ရောဂါလက္ခဏာတွေ, ကုသမှုနှင့်ပိုပြီး sarcoidosis နှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာပါ။
သင်တစ်ဦးအတိုင်ပင်ခံကိုရှာဖွေချင်ပါသလား? သငျသညျအနီး sarcoidosis အထူးကုသို့မဟုတ်ဆေးခန်းကိုရှာဖွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ directory ကိုသုံးပါ။
ဘယ်လိုအကြှနျုပျတို့သညျကိုထောကျပံ့နိုငျမလဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူနာပြုတိုင်ကြားမှု, ပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့များနှင့်အွန်လိုင်းပံ့ပိုးမှုအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များကိုရှာပါ။